R/wasaare Khayre oo xalay Casho sharaf u sameeyey wafdigii Turkiga ka socda - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA R/wasaare Khayre oo xalay Casho sharaf u sameeyey wafdigii Turkiga ka socda
Mudane, Xasan Cali Khayre raii’sul wasaaraha Jamhuuriyadda Sooomaaliya ayaa xalay kulan Casho sharaf soo dhaweyn ah u sameeyey wafdigii ka socday Dalka Turkiga, ee uu hoggaaminayay wasiirka Difaaca Dalkaasi, Ulusi Akar oo shalay booqasho ku yimid Soomaaliya.
Ujeedka kulankaasi ayaa ahaa sidii loogu muujin lahaa Turkiga sida Dowladda Soomaaliya iyo Shacabkeeda ay ugu faraxsanyihiin xiriirka walaaltinimo iyo Garab istaagga kala dhexeeya Turkiga.
Munaasabadda waxaa goob joog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee Dowladda Soomaaliya,iyadoo lagu soo bandhigay suugaan ka tarjumaysa wadaniyada iyo Dowrka Turkiga uu ku leeyahay taageerada Soomaaliya,iyadoo kooxda Horseed ee CX Dalku Heesahahooda ku qaadayeen luuqadda Turkiga.
Wasiirka Gaashaandhiga Dalka Turkiga, ayaa uga mahadceliya Dowladda Soomaaliya iyo Shacabkeeda soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen,isagoo muujiyay in Dowladda Turkigu ay ka go’antahay sidii ay u sii xoojin lahaa xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya iyo taageerada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Turkiga, ayaa dowr muuqda ku leh arrimaha Soomaaliya,iyadoo Sanadkii 2011-kii Soomaaliya u fidisay gurmadkii ugu ballaarnaa, xiligaasi oo abaaro ay ku dhufteen inta badan Gobollada Dalka.